क्रिकेट कप्तान पारस खड्कामाथि गम्भीर नैतिक संकट, के अब राजीनामा गर्लान् ? - Ratopati
क्रिकेट कप्तान पारस खड्कामाथि गम्भीर नैतिक संकट, के अब राजीनामा गर्लान् ?
काठमाडौं – राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्कामाथि गम्भीर नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । कप्तान खड्काकै योजनामा आरोपित बनाइएका नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि उनीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको हो ।
कप्तान खड्काकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले क्यानमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । खेलाडीको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष २५ जेठमा क्यानका १० पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनीले एक करोड ४३ लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतमा तीनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, १९ कात्तिकमा विशेष अदालतले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङसहित १८ जनामाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको छ । अदालतको यो फैसलाले खेलाडीले पूर्वाग्रही भएर क्यानका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको देखिएको छ । ‘यो पारस खड्काको क्यानप्रतिको पूर्वाग्रह हो भन्दा हुन्छ,’ क्यानका एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने ।
अदालतका न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी, मोहनरमण भट्टराई र भूपेन्द्रप्रसाद राईको इजलासले फैसला गरेको थियो । क्यानका अध्यक्ष आङ्बुहाङसहित उपाध्यक्ष विनोदकुमार मैनाली र सुनिलमान अमात्य, कोषाध्यक्ष राजबाबु श्रेष्ठ, सचिव ठाकुरप्रसाद पहाडी, सदस्य पूर्ण लामा, आर्थिक समितिका संयोजक चतुरबहादुर चन्द र सदस्य अशोकनाथ प्याकुरेल, किरणशमशेर राणा र ठाकुरप्रताप थापा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर अरुण उपाध्याय र ठेकेदार कम्पनी गौरा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सूर्य अधिकारी, खड्का कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजकुमार खड्का, आर कोमल कन्स्ट्रक्सनका रामशरण देउजा, नवनिर्माण कम्पनीका कृष्णप्रसाद पाण्डे, नेपाल कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्टका सञ्चालक पवन पाठकलगायतको संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको जनाइ आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।
अदालतको फैसलामा उनीहरूको संलग्नतामा कुनै पनि रकम हिनामिना नभएको देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष, सबै पदाधिकारी तथा ठेकेदार कम्पनीलाई सफाइ दिने निर्णय भएको जनाइएको छ । स्थानीय मूलपानीमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकममा भ्रष्टाचार भएको, सरकार र विदेशी संघ–संस्थाबाट उपलब्ध सहयोग दुरुपयोग गरेको, सामान खरिद गर्दै नगरी त्यसबापत भुक्तानी दिएको लगायत अभियोग पदाधिकारीलाई लागेको थियो । क्यानका पदाधिकारीले राष्ट्रिय टोलीका क्याप्टेन खड्काले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा टिप्पणी गरेको आरोप समेत लगाउँदै आएका थिए ।
विशेष अदालतबाट फैसला आउनुपूर्व खड्काले क्यानको अनुशासन मिचेको आरोप लागेको छ । क्यानको अनुशासन समितिले खड्काले अनुशासन विपरीत काम गरेको भन्दै उनलाई कप्तानबाट हटाउन निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय क्यानको पूर्वबैठकबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । अनुशासन समितिको निर्णय अनुमोदन नभएपछि क्यानले वल्र्ड च्याम्पियनसिप खेल्न जाने खेलाडीको नाम र कप्तान छनोटमा समेत ढिलाइ गरेको थियो । खेलाडी वल्र्ड च्याम्पियनसिप खेल्न जानु केही घन्टाअगाडि मात्र खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । क्यानको उत्त निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जानु एक साताअगाडि नै खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रचण्ड मिचेर क्यानले अन्तिम समयमा नाम बाहिर ल्याएको थियो । कप्तान पारसलाई कायम राख्न नहुने अनुशासन समितिका सदस्यको अडानपछि टोली चयनमा ढिलाइ भएको क्यानका एक अधिकारीले बताए । नेपाल युएईमा पुपुअन्युगिनीसँग खेल्ने कार्यक्रम छ । सोमबार खेलाडीको नाम चयन भएपछि मंगलबार टोली युएई गएको थियो । गत महिना क्यानको अनुशासन समितिले राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारसलाई अनुशासनको कारण देखाएर पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । कप्तान पारसले क्यानद्वारा जारी निर्देशनविपरीत कार्य गरेको अनुशासन समितिको ठहर थियो । अनुशासन समितिका संयोजक केशव घिमिरे क्यानका उपाध्यक्ष नै हुन् । पछिल्लोपटक टोलीमा वैकल्पिक खेलाडी समेत राखिएको छैन । ‘विवाद भएपछि अन्तिम समयमा सबै कुरा मिलाउन सम्भव भएको थिएन,’ क्यान स्रोतले भन्यो । अनुशासन समितिका सदस्यले टोली घोषणा गर्ने क्यानको निर्णयमा आफूहरूको फरक मत रहेको बताएका छन् ।
क्यानमा बढ्दो विवादपछि प्रशिक्षक पुबुदु दासानायले बिदा लिने निर्णय गरेका छन् । युएई भ्रमण उनको राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षकका रूपमा अन्तिम भ्रमण हुँदै छ । अनुशासन समितिले पारसलाई कप्तानबाट निर्णय गरेलगत्तै प्रशिक्षक दासानायकेले बिदा लिने निर्णय गरेका थिए । नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग अक्टुबर २८ र ३० मा काठमाडौंमा खेल्ने कार्यक्रम थियो । तर, अन्तरौष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै उक्त खेल नोभेम्बर १६ र १८ तारिखमा खेल्ने गरी आबुधाबीमा सारेको हो । गत जनवरीमा नामिबियामा भएको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ मा चौथो भएसँगै नेपाललाई च्याम्पियनसिप खेल्ने मौका आएको थियो । आठ राष्ट्र सहभागी च्याम्पियनसिपमा एउटा टिमले घरेलु मैदानमा तीन, अवेमा तीन र तटस्त भूमिमा गरी १४ एकदिवसीय खेल खेल्न पाउनेछ । त्यसपछि शीर्ष टोलीले सन् २०१९ को विश्वकपको छनोट खेल्न पाउनेछन् ।